N’Ijipt oge ochie, a kpọrọ ndị mkpọrọ “skr-cnh” nke pụtara “a dọtara n’agha” - Afrikhepri Fondation
Tuzdee, Ọgọstụ 11, 2020
EN'Ijipt oge ochie, a na-akpọ ndị mkpọrọ “skr-cnh” nke pụtara “onye a dọtara n'agha”. Ọ bụ otu ihe niile na kama, onye mkpọrọ bụ onye a dọtara n'agha nke nwere ikike ma nweekwa ikike ụfọdụ, ọ bụghị ohu, ihe, ma ọ bụ ihe a ga - awakpo ụdị niile. nke mkparị. Ya mere, okwu ohu abughi na mgbọrọgwụ ya na Africa, kama na Europe, ebe nkwanye ugwu maka mmadu abughi ihe kwekọrọ n'echiche ime mmụọ nke ndi Africa.
Ọzọkwa, dị ka onye ọkwọ ụgbọ mmiri Italiantali Ca Da Mosto si kwuo, ha jidere ndị ohu, mee ha baptizim, kuziere ha Pọtugal, nye ha aha ndị Europe, weghachitere ha n'Africa iji jide ma ree ndị ohu ndị ọzọ; gbakwunye na nke a ọtụtụ ndị omekome, ndị na-egbu ọchụ, ndị agha Portuguese na mmadụ nwetara usoro mwakpo nke ga-ewe ihe karịrị afọ 400.
Ka anyị tinye onwe anyị nwa oge ole na ole gbasara eziokwu; are bụ onye Africa n'ala gị nke eji ụta, ube na ọta wee bịa n'ụlọ gị nke ndị ọcha nwere egbe, egbe, ndị nwere naanị otu ebumnuche, ijide kacha ojii (nwa ọla edo nke oge ahụ) n'ụzọ niile. Anyị na-echeta na ntọala nke azụmaahịa bụ mgbanwe nke ngwa ahịa ma ọ bụ usoro. Ebe ahia ahia di ebe a? Ka anyị mee ihe ziri ezi ma nwee ọgụgụ isi na nzaghachi anyị, ndị isi a ahọrọghị ire, mana a manyere ya, ọ bụrụ na ọ bụghị ya kpatara na ha emeghị ya tupu mbuso agha nke obodo ha site na ndị ọcha.
Extrafọdụ ntụpọ sitere n'akwụkwọ Mr Bwemba-Bong “Mgbe ndị Africa bụ ọla edo ojii nke Europe, mbipụta MENAIBUC”.
King Alfonso I (NzingaMbemba) eze Kongo: “kwa ụbọchị, ndị ahịa na-ezubere ndị anyị na ha na-achị, ụmụ nke mba a, ụmụ ndị isi anyị na Vassals, ndị ikwu anyị (…) iji zere mmekpa a, anyị enweghị chọrọ na alaeze a nke ndị ụkọchukwu na mmadụ ole na ole ga-akụzi n'ụlọ akwụkwọ (…) ọ bụ uche anyị ka alaeze a abụghị ebe azụmahịa ma ọ bụ mbupụ nke ndị ohu ”
King Tezifon nke Allada “are ga-ewu ụlọ ebe ị ga-ebu ụzọ tinye obere iyuaji abụọ, n’afọ na-eso ya ị ga-akwụgo anọ, ma n’oge na-adịghị anya, ụlọ ọrụ gị ga-agbanwe ka ọ bụrụ ebe a ga-eme ya. ime ka ị bụrụ onye nwe steeti m na ime ka ị nwee ike itinye iwu n'iwu m ”.
Almany, eze ndị Alakụba na ndị isi niile nke obodo ya… anyị na-adọ gị aka na ntị na ndị niile ga-abịakwute anyị ka azụmaahịa ahụ ga-egbukwa ma gbuechapụ ma ọ bụrụ na i zigaghị zitere anyị ụmụ anyị… anyị achọghị nnọọ ịzụta ndị Alakụba ma ọ bụ na ị zụtaghị site na mgbe dị anya ”
Ndị Africa eguzogidewo azụmaahịa ohu mgbe niile. Ọgụ ha busoro ndị na-azụ ahịa ohu mere ka mbibi nke alaeze niile dị na Afrịka, nke na-enweghị ike iguzogide n'agbanyeghị ndị mwakpo ịlụ agha ka mma. Ọ bụ mgbe a kwụsịrị ntọala nke isi nke alaeze, nke mba ndị ohu, nke ndị eze nwa nkịta Africa ma ọ bụ ndị ọcha nwere aha Africa nke a ga-atụle n'oge anyị ka ndị Africa na-ere afọ ojuju maka ndị ibe ha.
“Ọ bụ ihe na-ekpughe ịhụ na ajụjụ banyere ịhụnaanya ịhụ mba n'anya nke metụtara mmadụ niile bụ naanị nsogbu na ikpe maka ndị Africa oge ohu. Ihe a na - ezo ihe. Ndị Europe jidere ma resị ndị ibe ha na Arab maka ọtụtụ narị afọ iji rite uru n'ahịa ohu n'oge ahụ. Ndị Frian rere ndị Jamani ihe ha riri n'oge Agha IIwa nke Abụọ. Ha resịrị ndị Juu ọtụtụ puku site na nhịahụ nke ndị isi nke steeti… n'ihe gbasara French, anyị na-etinye onye otu na-eguzogide Jean Moulin na n'ọnọdụ ndị Africa, anyị bụ ndị amnesiac. Indfọdụ ndị India jere ozi dịka ndị ọchịagha na ndị agha America n'oge mmeri nke ọdịda anyanwụ, ndị China raara gọọmentị n'oge oge ọchịchị mgbe ahụ bụ pro-Anglo-Saxon, mana ọ bụ naanị ndị Africa ka a na-ekpe ikpe site n'ikwu na ha rere ụmụnne ha. Echiche nke ụmụnne naanị nwere ezigbo ihe ọ pụtara mgbe emumemgbu mechara bibie ndị Africa niile na-eme otu ụdị. Tupu mgbe ahụ, ha bụ ndị dị n'otu ma ọ bụ na njikọ aka, nke dị n'okpuru ma ọ bụ na ọ bụghị. Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme nke ọdịda anyanwụ na-abịakwute akụkọ mgbere tupu oge ndị ọchịchị site na ịkpọsa na ụgwọ niile nke ndị eze Africa, na-etinye aka na agha nke enweghị mmekpa ahụ, n'ikpeazụ hụrụ ọtụtụ ndị ohu nke a ga-ere n'ihe niile. Nke a bụ enweghị ezi uche na enweghị ntụkwasị obi nke ọgụgụ isi. ”[Wpdiscuz-feedback id =” 7067auunqj ”ajụjụ =” Kedu ihe ị chere? ” meghere = ”1 ″] [/ wpdiscuz-nzaghachi]
Site na kamit Serge Bonza
Mgbe onye Africa bu ọla edo ojii nke Europe
ka Ọgọst 10, 2020 4:13
Ụbọchị mwepụta 2013-03-25T00:00:01Z
Edition Mbipụta 3e
Publication Ụbọchị 2013-03-25T00:00:01Z
Ime Anwansi nke Cosmos - Documentary (2012)
na nzuzo nke akụkụ joometry dị nsọ - Akwụkwọ edemede (2010)